Faharesan-dahatra noho ny vinan’asa entin’ny kandidà laharana faha-13 ao amin’ny biletà tokana no mahatonga ny antoko ABA tarihin’ny Jeneraly Jean Ravelonanarivo manohana ny kandidà Andry Rajoelina, raha ny fanambarana nataony omaly. Tsy vitsy hoy izy ny teboka hitovizana, indrindra ny mikasika ny tsy fandriampahalemana sy ny ady amin’ny kolikoly ary ny fanomezana lanja ny vehivavy sy ny tanora.
“Hitanay fa ny kandidà laharana faha-13 ihany no hahavaha ny olan’ny tsy fandrampahalemana eto Madagasikara” hoy ny jeneraly Ravelonarivo nanamafy.
“Hita taratra amin’ireny atrik’asa lehibe natao teny Ivato ireny fa manana tetik’ady maty paika ny kandidà laharana faha-13 amin’ny famongorana ny asan-dahalo” hoy hatrany ny fanazavan’ity manamboninahitra jeneraly ity.
“Hita taratra ihany koa ny finiavan’ity kandidà tanora dia tanora ity hamongotra ny kolikoly sy ny fanarenana ny tany tandalàna” hoy hatrany ny antso avon’ny antoko ABA. Noho izay antony rehetra izay, vonona hanohana sy hampandany ny kandidà laharana faha-13 izany ireo mpikatroka ao amin’ny antoko, ary tsy hihemotra fa vonona ny hanohana hatramin’ny farany.
Nanao antso avo ireo mpanohana azy noho izany ny Praiministra teo aloha Jeneraly Jean Ravelonarivo sy ny antoko ABA tantanany, mba handatsa-bato ho an’ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 ny rehetra amin’ny 19 desambra 2018 ho avy izao.